Ny praiminisitra dia maniry ny hiantehitra amin'ny serivisy fiarovana ho an'i Russia ny Vietnam Airlines
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny praiminisitra dia maniry ny hiantehitra amin'ny serivisy fiarovana ho an'i Russia ny Vietnam Airlines
Vietnam Airlines dia tokony hiasa hiantohana ny serivisy azo antoka sy mifaninana mandritra ny sidina mankany Russia. "Ny dia eo anelanelan'i Vietnam sy Russia izao dia manan-danja kokoa noho ny teo aloha, rehefa miasa izy ireo hampiroborobo ny fiaraha-miasa stratejika feno, indrindra ny varotra sy ny fampiasam-bola, hoy ny praiminisitra vietnamiana Nguyen Xuan Phuc."
Nanatrika ny lanonana notontosain'ny Vietnam Airlines ny 23 May ho fanamarihana ny faha-15 taonan'ny sidina mivantana niarahan'ny firenena roa tonta, hoy ny PM Phuc fa miaraka amina fiaramanidina maoderina, serivisy avo lenta ary koa mpanamory efa voaofana tsara, Vietnam Airlines dia zotram-piaramanidina malaza any Vietnam sy izao tontolo izao.
Raha niresaka fatratra ny anjara andraikitry ny mpitatitra amin'ny maha ambasadaoro hanatsara ny fisakaizana sy hanosika ny olona Vietnamianina sy ny tany akaiky kokoa ny firenena Eoropeana Atsinanana, ny PM Phuc dia nangataka ny Vietnam Airlines hanohy hamolavola ny drafi-pampandrosoana maharitra ary hikarakara hetsika ara-kolontsaina mandritra ny Taona Vietnam any Russia sy ny Taona Rosiana any Vietnam mankany amin'ny fankalazana faha-70 ny fifandraisana ara-diplaomatika.
Maniry izy ny hametrahan'ny manampahefana mahefa any Rosia fepetra tsara ho an'ny Vietnam Airlines hahafahan'izy ireo manome serivisy kalitao ho an'ireo mpandeha, indrindra ny fotoam-pialanany, ny fomba fiasan'ny zotra sy ny sidina.
Vietnam Airlines dia nanokatra ny sidina voalohany nankany Russia tamin'ny Jolay 1993 niaraka tamin'ny toerana fandalovana tao Dubai Emira Arabo Mitambatra.
Iraika ambin'ny folo taona taty aoriana, ny serivisy dia niasa mivantana tany Rosia niaraka tamin'ny Boeing 777- ny fiaramanidina maoderina indrindra tamin'izany fotoana izany, nanampy tamin'ny fampitomboana ny isan'ny mpandeha notaterina in-10.
Vietnam Airlines dia nampiasa Dreamliners manerana ny vatana 787-9 eo amin'ny zotra hanatsarana ny kalitaon'ny serivisy sy ny traikefan'ny sidina ho an'ny mpanjifany nanomboka ny taona 2018. Ny sidina entin'ireo mpitatitra dia nanjary tetezana lehibe hampiroboroboana ny fifandraisana ary koa hisokafan'ny fiaraha-miasa feno eo amin'ny toekarena, siansa, fanabeazana, fizahan-tany-kolontsaina eo amin'i Vietnam sy i Russia.
Araka ny voalazan'ny filohan'ny filankevi-pitantanan'i Vietnam Airlines Pham Ngoc Minh, ny tambajotram-pitaterana an-habakabaka eran-tany sy ny fiaraha-miasa amin'ireo kaompaniam-pitaterana laza manerantany dia mamela ny mpandeha hitety an'i Azia sy Eropa amin'ny alàlan'i Russia mora foana.
Indrindra indrindra, ny Vietnam Airlines dia hamindra ny asany any Moskoa manomboka amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo manomboka ny 2 Jolay 2019. Ity ezaka ity dia mikendry ny hampitombo ny fifandraisana eo amin'ireo sidina mankany amin'ny toeran-tany any Russia sy Europe amin'ny alàlan'ny codeshare an'ny Vietnam Airlines sy ny kaontenera voalohany an'i Aeroflot.
Rehefa mifindra any Sheremetyevo ianao, Vietnam Airlines dia hanova ny fandaharam-potoanan'ny sidina manelanelana an'i Hanoi sy Moskoa mba hahamora ny mpandeha azy ireo. Manokana, ny sidina dia hanomboka amin'ny 1:10 any Hanoi ary amin'ny 14:40 ao Moskoa.
I Russia dia isan'ireo 10 mpizahatany mpizahatany tany Vietnam. Tamin'ny taona 2018, Rosiana maherin'ny 600,000 no nankany Vietnam, ka nahatonga ny fireneny ho tsena loharano fahenina lehibe indrindra ho an'ireo mpitsidika ny firenena Azia atsimo atsinanana. Ny fitondrana nasionalin'ny fizahan-tany any Vietnam dia naminavina fa hahatratra 1 tapitrisa ny isan'izy ireo amin'ny taona 2020.
Talohan'izay dia nahazo ny CEO an'ny Kaspersky Lab, Kaspersky Evgeny Valentinovick, ny praiminisitra Ph Phuc, izay nanamafisan'i PM Phuc fa maniry fiaraha-miasa amin'ny fiarovana an-tserasera i Vietnam ary manantena izy fa hanampy ny Governemanta Vietnam any an-toerana i Kaspersky, indrindra ny fisorohana ny otrik'aretina sy ny kaody maloto ao amin'ny solosain'ireo masoivoho rafitra.
Manamora hatrany ny fepetra ho an'ny orinasa Rosiana sy Kaspersky, indrindra ny governemanta Vietnamese, amin'ny fampandehanana ny orinasany any Vietnam, hoy izy nanamafy.
Ny tale jeneralin'ny Kaspersky Lab, amin'ny lafiny iray, dia nilaza fa ny orinasa dia hanampy an'i Vietnam amin'ny vahaolana amin'ny fiantohana ny fiarovana ny cyber, ary hanisy tondrozotra manokana ary hitahiry ny maodely eto amin'ny firenena.